काठमाडौँका नयाँ प्रहरी प्रमुख रविन्द्र धानुक, दिवेश लोहनी अपराध महाशाखामा, २५ एसएसपी को कहाँ पदस्थापन? - Tree Media News
काठमाडौँका नयाँ प्रहरी प्रमुख रविन्द्र धानुक, दिवेश लोहनी अपराध महाशाखामा, २५ एसएसपी को कहाँ पदस्थापन?
tmednewsPosted on ५ भाद्र २०७४, सोमबार
काठमाडौँ : एसएसपी बढुवा सूचीमा सबैभन्दा पछाडि रहेका रविन्द्रबहादुर धानुक काठमाडौँका नयाँ प्रहरी प्रमुख बनेका छन्। छविलाल जोशीको डिआइजीमा बढुवा भएपछि खाली रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुखको पदमा कसलाई ल्याउने भन्नेबारे आइजी र गृहमन्त्रीबीच विवादका कारण लामो समयदेखि पदस्थापन हुन सकिरहेको थिएन।
अन्ततः गृहमन्त्रीकै इच्छा अनुसार धानुक प्रमुख भएका छन्। धानुक यसअघि रुपन्देहीका जिल्लामा प्रहरी प्रमुख भइसकेका अफिसर हुन्। गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुवैका विश्वास पात्रसमेत हुन् धानुक।
रुकुमको प्रहरी प्रमुख हुँदा एसएसपी धानुक र हालका गृहमन्त्री शर्मासँग नजिकिएका थिए। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच धानुकलाई नै प्रमुख बनाएर पठाउने पक्कापक्की भइसकेको थियो।
त्यसैगरी अपराध अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण महानगरीय अपराध महाशाखामा दिवेश लोहनीको पदस्थापन भएको छ। लोहनी यसअघि सप्तरीका प्रहरी प्रमुख थिए। उनी प्रमुख हुँदा सप्तरीमा एमालेले गरेको कार्यक्रममा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप हुने क्रममा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनापछि त्यहाँ कार्यरत एसपी लोहनीलाई काठमाडौँ फिर्ता बोलाइएको थियो।
त्यस्तै ललितपुर प्रहरी प्रमुखमा गणेशबहादुर ऐरको पदस्थापन भएको छ। नयाँ दिल्लीस्थित राजदूतावासमा पुरुषोत्तम कँडेललाई पठाइएको छ।
को कहाँ पदस्थापन? हेर्नुस् सूची
Previous Postआज कुशे औशी तथा पिताको मुख हेर्ने पवित्र दिनPrevious Post
Next Postसंशोधनमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन दौडधूप, कसको पल्ला भारी?Next Post
As of 02 August 2019